Lockdown yakavhiringa chikamu chezvekuvaka | Kwayedza
27 May, 2021 - 16:05 2021-05-27T16:41:07+00:00 2021-05-27T16:41:07+00:00 0 Views
CHIRONGWA chakaitwa neHurumende chekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 mukutanga kwegore rino chakadzosera kumashure mamwe mabasa ebudiriro anosanganisira emuchikamu chezvekuvaka, asi ndokuonawo kusimudzirwa kwezvakadai sekushandiswa kwedandemutande mukuita mabhizimisi nezvimwe zvakasiyana.
Vachitaura kuvatori venhau nemusi weChipiri mushure memusangano wedare reCabinet muguta reHarare, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Senator Monica Mutsvangwa, vanoti Professor Muthuli Ncube – avo vanova gurukota rezvemari – vakatura gwaro riri pamusoro pekufambiswa kwakaitwa chirongwa chebudiriro munyaya dzezveupfumi cheNational Development Strategy (NDS1) muchikamu chekutanga chegore rino.
Gwaro iri riri pamusoro pebudiriro yavepo mukufambiswa kwechirongwa cheNDS1 muzvikamu 14 zvakasarudzwa.
Ongororo yebudiriro iyi yakaitwa nekomiti yeNational Monitoring and Evaluation (M&E) Joint Review Committee.
Sen Mutsvangwa vanoti chikamu chezvekuvaka chakakanganiswa zvikuru nelockdown sezvo chisina kunge chakatorwa sechinokosha panguva iyi.
“Panyaya yekuvaka, dzimba dzinosvika 569 dzakavakwa uye ndokupedzwa kana zvichienzaniswa ne2 000 dzaitarisirwa muchikamu chekutanga ichi.
“Chirongwa chelockdown chekurwisa Covid-19 chakadzosera kumashure zvikuru indasitiri yezvekuvaka sezvo isina kunge yatorwa seinokosha (essential service) pakutanga kwegore,” vanodaro.
Sen Mutsvangwa vanoenderera mberi vachiti, “Muchikamu chekufambiswa kwenyaya dzeupfumi kuburikidza nedandemutande, pakave nekusimukira kukuru kwekushandiswa kweICT neveruzhinji, vemabhizimisi nevechikamu chedzidzo zvichitevera matanho akatorwa ekurwisa kupararira kweCovid-19.”
Vanoti ongororo yekufambiswa kwechirongwa cheNDS1 muchikamu chepiri chegore yakatotanga.
Sen Mutsvangwa vanoti chirwere cheCovid-19 chichirimo munyika nekudaro veruzhinji vanofanirwa kuramba vachitevedzera matanho akatarwa neWorld Health Organisation (WHO) ekuzvidzivirira kubva kudenda iri anosanganisira kupfeka mamasiki nemazvo, kusaita chitsokotsoko nekushambidza maoko nguva nenguva.
“Cabinet inoda kusimbisa kuti Covid-19 tichiri nayo. Kunyangwe zvazvo paine matanho ari kutorwa ekudzivirira veruzhinji kudenda iri, vanhu vanokurudzirwa kuti varambe vakangwarira vachitevedzera matanho ose akatarwa neWorld Health Organisation (WHO) pamwe chete neenyika kuitira kuti tikunde njodzi iyi,” vanodaro.
Kusvika nemusi weChitatu svondo rino, vanhu 38 819 vange vawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 mushure mekuvhenekwa muZimbabwe.
Pavarwere ava, 36 531 vakatopona asi vamwe 1 589 vakafa.
Kusvika nemusi uyu zvakare, vanhu 643 531 vange vabaiwa majekiseni ekutanga (1st dose) ekudzivirira chirwere cheCovid-19 apo 293 509 vange vabaiwa echipiri.